Semalt Expert - Ahoana ny fiatrehana ny fampitandremana amin'ny hosoka amin'ny aterineto?
Ireo mpangalatra dia mahita fa mora kokoa ny mifehy ny biriky virtoaly izay manana Internetamin'ny alalan'ny aterineto. Raha vantany vao tafapetraka izy ireo, dia manangona ny ao anatiny izy ireo raha tsy fantatry ny tompony fa lasa izy. Ny zava-misy dia ratsy kokoa ho an'ireoizay tsy mahafantatra ny fotoana hahatongavan'izy ireo ho mpanitsakitsaka - japan vps providers. Tamin'ny taona 2000, dia niparitaka be ny olana nahazo an'i Etazoniahiakatra amin'ny Ivotoerana misahana ny heloka amin'ny Internet (IC3). Ny IC3 dia toy ny trano fandroahana izay mandray sy mitaiza ny fitarainan'ny hosoka rehetra arytatitra mifandraika amin'ny Internet.
Mpitantana Success Successor Semalt Digital Services, Max Bell, dia manome hevitra manan-danja momba ny hosoka an-tserasera sy ny fomba hisorohana izany.
Ny Internet ho toy ny mpangalatra mpangalatra
Satria ny tranonkala dia toy ny loharanom-baovao, dia toy ny sehatra tsara izy ioavy amin'ireo mpanakanto mpanakorontana no manala ireo niharam-boina. Ny hosoka dia manondro ny fahamarinana diso na manafina ny zava-misy marina izay mitondra ho an'ireo tra-boinamandray andraikitra izay, amin'ny farany, handoa azy ireo.
Ny fangalarana sy ny hosoka famantarana
Na dia ny olona mitandrina aza dia tratran'ny fangalarana ny maha-izy azy. Ny skimming dia ny dingana izaydia mampiasa fitaovana elektronika mba hitehirizana sy hamerina ny fampahalalana momba ny carte de crédit avy amin'ny mpampiasa taorian'ny fividianana azy. Ny fanambaràna dia rehefa misy olonadia miantso tompon-tsoavaly mihambo ho solontenan'ny orinasa iray ary mangataka ny angon-drakitra manokana momba ny fanavaozana ny angona. Indray mandeha dia misy mpangalatra mangalatrany maha-izy azy, afaka mampiasa ny fampahalalana izy ireo amin'ny fitondrana hosoka amin'ny fanaovana ID fo amin'ny anarana.
Ny mpampiasa dia afaka miaro ny tenany amin'ny fametahana ny mailaka sy ny vola rehetra tsy ilainy.Ampio ny fanalahidy fiarovana amin'ny mailaka manokana. Raha matahotra ny karatra amin'ny carte de crédit, tokony hifidy ny hampiasa vola izy ireo. Aza avela velivelyfanazavana manokana na inona na inona toe-javatra.
Ny hosoka amin'ny famantarana ny fahasalamana momba ny fahasalamana
Ny karatra fiantohana very na nosamborina dia mety hiseho amin'ny tranganà hosoka. Manohy hatrany ny mpisolokydia nanjary be pitsiny toy ny trangan'ny taona 2004, izay nisy 30 tapitrisa dolara tamin'ny fanambarana tsy ara-dalàna. Mety hisy hosoka amin'ny maha-olonavokatra avy amin'ny telemarketing, mailaka mailaka, na mpiasa tsy afa-po. Ity farany dia mety hamorona lalan-diso mamitaka momba ny antontan-taratasy momba ny marary..
Ny olona dia tokony hiantoka ny rakitra ara-pitsaboana, ny fiantohana fiantohana ary ny hafafialana amin'ny mpangalatra. Ny fiantohana rehetra dia mitaky ny isa tsy ampiasaina amin'ny fampiasana filana. Ny marary dia mila manalavitra ny fahasalamana bodofotsyfanekena ara-tsosialy. Tokony ho fantany ny habetsaky ny vola azony aloa avy any am-paosiny.
Fanamarihana mba hampihenana ny fanovàna
Ny fampandrenesana ny hosoka amin'ny aterineto dia mampahafantatra ny olona amin'ny asa mampiahiahy izay mahakasika azy ireo,ka mamela azy ireo hihetsika haingana. Ny mpampiasa iray dia mahita ny asa manokana izay ezahin'ny mpangalatra miditra. Ny tompon'ny kaonty, banky naNy fikambanana dia mamaritra mari-pahaizana momba ny fotoana sy ny fomba ahafahan'ny fampitam-baovao mivezivezy sy mahatratra ny tompony. Ny parameter dia mamela ny fahafahanafikambanana hanaraha-maso ny asa atao. Ny fifanakalozan-kevitra ivelany ivelan'ireny fepetra ireny dia miteraka fampahafantarana. Izany dia manome ny mpampiasa hamaly rahaMankasitraka na tsy mankasitraka an'io voalaza io izy ireo. Ny orinasan'ny carte de crédit ihany koa dia manampy amin'ny fisorohana ny fangalarana ny maha-izy azy amin'ny alàlan'ny fanarahana ny mpampiasafampahatsiahivana. Ireo orinasa ireo dia manao sainam-pirenena izay tsy mifanaraka amin'ny mombamomba azy. Na izany aza, miankina amin'ny mpanjifa ny zavatra nataony ezaka amin'ny fanaovana fitarainana sy tatitra momba ny asa mampiahiahy.
Raha miseho ny fisian'ny hosoka anaty aterineto, dia atomboy amin'ny famaliana azy avy hatranyManamaivana ny asan'ny mpikomy amin'ny kaonty. Avy eo, mamorona fampandrenesana ny hosoka amin'ny tatitra momba ny bola izay mitondra vaovao vaovao isaky ny misyMisy andian-tsoratra fangatahana vaovao. Mangataha dika mitovy avy amin'ny orinasa karatra mba hijery sy hijerena izay asa tsy fantatra. Orinasa sasanymanolotra ny safidy mba hanamaivana vola amin'ny tatitra bola. Maneritery izay afaka mahazo ny tatitra.
Mitantara ny fanararaotam-pahefana
Ny olona vao haingana dia mamaly amin'ny fisian'ny hosoka dia ny haingam-be dia afaka mifehyny fampiasana ny angon-dry zareo. Ny dingana voalohany dia ny filazana ireo tranga momba ny fangalarana ny maha-olona amin'ny biraon'ny banky. Amin'ny fampandrenesana, manakana azy ireo izanyFanokafana kaonty vaovao eo ambanin'ny anaran'ilay niharam-boina. Ny dingana manaraka dia ny fanamarihana ny manampahefana.
Ny ampahany manan-danja indrindra dia ny mifandray amin'ny orinasan-tsakafo. Mety misyMila manova kaonty, logins, ary tenimiafina. Ary koa, ny fifandraisana amin'ny orinasan-telefaona dia afaka miasa amin'ny tombony tompony satria mety hampahafantarin'izy ireony mpampiasa ny fiovana rehetra. Hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fanambarana sy ny tatitra izy ireo.